Sri Lanka: Mihamafy Ny Fatotra Manery Ny Fahalalahana Miteny Antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2012 22:25 GMT
Mamely ny fahalalahana miteny amin'ny aterineto ao Sri Lanka ny lalàna vaovao navoakan'ny fitondrana. Tsy maintsy handoa Rs. 25.000 ($193) ho fisoratana anarana ary Rs. 10.000 isan-taona ho fitazonana ny fisoratana anarana ny vohikalam-baovao rehetra manomboka izao. Manahy ny sasany amin'ny mety hiitaran'ny lalàna amin'ny bilaogin'olo-tsotra iray manokana, sy ny mety ho fanivanan-tena ataon'ny bilaogera mihitsy aza, noho ny tahotra.
Nitatitra ny Komitim-Piarovana ny Mpanao Gazety (CPJ):
Nanakatom-baravarana ny Fitsarana Tampony ao Sri Lanka momba ny fanakatonana vohikala efatra izay tsy nisoratra tany amin'ny governemanta. Tamin'ny famoahany ny fanapaha-keviny, tahaka ny nametraka ny Fitsarana fa tsy zo fototra ny fahalalahana miteny any Sri lanka ary mety azo ferana — ary tsy mila mandany lalàna hanaovana izany.
Nivoaka ny didy rehefa nametraka ny fiarovana fa tsy misy lalàna manery ny tompon'ny vohikala hisoratra anarana, noho izany tsy manana fahefana hanakana araka izay tiany atao ny minisiteran'ny Fampahalalam-Baovao sy ny Vaomiera Mpandamina ny Fifandraisandavitra. Saingy nandray fepetra haingana ny fitondrana hanamafy izany.
Ny 12 Jolay nananmbara ny Minisitry ny Fampahalalam-Baovao Sri Lankey Keheliya Rambukwella fa mieritreritra ny hametraka lalàna vaovao momba ny Holafitry ny Gazety ny fitondrana hanaraha-maso ny tranokalam-“baovao”. Nomarihany fa “hampandoa Rs. 100.000 ($US770) ny vohikala ho fisoratana anarana sy Rs. 50.000 isan-taona ho fitazonana ny fisoratana anarana” ny governemanta. Nolazainy ihany koa, “raha misy olona na rafitra voantohintohina na mahatsiaro alam-baràka amin'ny vaovao diso, na sary mivoaka amina gazety dia afa-mitory any amin'ny Holafitry ny Gazety Sri Lankey.”
Raha miresaka fanalam-baràka ny fitarainana, mety ho voasazy handoa onitra mahatratra hatramin'ny 5000 ropia ny voampanga na migadra roa taona, na izy roa miaraka. Mety hiteraka fanasaziana ihany koa ny famoahana ny resaka nandritra ny filankevitry ny governemanta, ny “tsiambaratelom-panjakana”, ny angom-baovao momba ny fahazoam-bolan'ny fitondrana na resaka fiarovam-pirenena
Niteraka dom-berina mavaivay avy hatrany izany na ivelany na anatin'ny serasera. Niaraka tamin'ny mpikatroka nanao fihetsiketseham-panoherana tao Colombo ny mpitarika ny antoko mpanohitra.
Nanoratra i Thoughtful Kani:
Zavatra iray ny misoratra anarana fa tsy izy kosa ny latsak'emboka Rs.100.000
Niteny tany Colombo ny sekreteran'ny minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Gazety tamin'ny 27 jolay fa tsy ho avy haingana ny fametrahana ny Fanambarana ny zo hahalala vaovao eny amin'ny parlemanta. Efa nandà izany hatry ny ela ny fitondrana ankehitriny.
Nohamafisin'ny governemanta tamin'ny 9 aogositra fa nitazonina ny sara-pisoratana anarana ary nambarany fa hahena hatramin'ny 80% ny tolo-kevitra voalohany. Efa natao ho Rs 25000 sy 10000 avy ny sara-pisoratana anarana sy ny fanavaozam-pisoratana anarana.
Voarahona ny fahalalahana an-tserasera:
Nikapoka ny fanapahan-kevitra ny Indi.ca:
Manana mpamokatra fakofakon'akora ho an'ny daholobe andoavam-bolampanjakana, tahaka an'i Mervyn Silva, ny fitondrana. Tsy zakan'izy ireo ny tsikera na ny vaovao manohitra azy ireo, izany hoe ny fahalalaham-pitenenana. Fandisoana tanteraka sy henatra izany.
Miresaka i Patta Pal Boru:
Ilay faniriana hanara-maso ny zava-drehetra no ivon'ny olana.
Manahy ny bilaogera fa mety hampisavoritaka ny fanapahan-kevitra ity amin'izay hoe inona no mandrafitra ny vohikalam-“baovao”. Mety hahatonga ny bilaogera haniva-tena io noho ny tahotra, izay lasa manome vahana ny sivan'ny fitondrana mazava loatra.
Manoratra ny fiantraikan'ny lalàna vaovao i Sanjana Hattotuwa:
Miharihary fa ho latsaka eo ambanin'ity hetra vaovao ity ny vohikalan'ny gazety be mpanaraka. Saingy afa-manome vaovao mendrika hotantaraina ny rehetra na avy aiza na avy aiza amin'ny fotoana rehetra, noho izany mety hahasahana haingana dia haingana ny bolongan'olo-tsotra sy ny bolongana bitika (kaonty Twitter), vondrona Facebook na takelaky ny mpitia, votoaty amin'ny sehatra tahaka ny Bundlr izay mifantim-baovao mandritra ny fotoana maharitra na amina lohahevitra iray na hetsika iray, sary avoaka ao amin'ny Flickr izay mamoaka hetsika andalam-pnatanterahana ary ny fantsona Youtube ity lalàna vaovao ity. [..]
Ny vaovao amin'izy ity dia azo alefa manatrika fitsarana araka izay tian'ny governemanta ny rehetra, na avy aiza na avy aiza ao Sri Lanka
Groundviews moa nanomboka nifantim-baovao mitondra ny lohateny hoe Sivana Tranonkala ao Sri Lanka: manangona antontan-kevitra fironana mihamalaza iray izay miompana amin'ny sivana ao Sri Lanka sy ny toetoetry ny Fahalalaham-pitenenana antserasera ao efa am-bolana izao.
Araka an'i Patta Pal Boru:
Tena zava-dehibe ny manangana forum, hetsika ary fihetsiketseham-bahoaka, mba hanohetana ny fampiasana ny fampitam-baovao amin'ny fomba tahaka izao. Ny fanjakana tsy matahotra tsikera ihany no mendrika holazaina ho sivilize